MSP Home - HABRAACA QAANSHEEGADKA SHAAGAGGA LA-BANJARIYEY
MSP HomeCurrently selected
HABRAACA QAANSHEEGADKA SHAAGAGGA LA-BANJARIYEY
Maxaa dhacay iyo sabab
Markii uu dhawaan socday kacdoonkii dadweynaha ee Minneapolis, ciidanka ammaanka jidweyneyaasha gaadiidka ee State Patrol iyo xafiisyada booliska kale ayaa xeelad ahaan u banjariyey shaagagga baabuurta qaarkood.
Markii ugu darneyd ee uu socday kacdoonka, gaadiidka – qaarkood ayaa la xaday – oo loo isticmaalay sidii hub oo kale iyo in hub lagu daabulo, oo waxay halis dhab ku ahaayeen badqabidda booliska iyo dadkii kale ee sida nabdoon u sameynaayey mudaaharaadka. Lama sameyn karin in la jiido wax gaadiid ah markii uu socday qalalaasaha.
Ciidanka ammaanka jidweyneyaasha gaadiidka ayaa xeeladdaas ku isticmaalay dhowr meelood oo magaalada ka mid ah, oo waxay ahayd si looga hortago baabuurta in loo isticmaalo weerarkii socday.
Tirada baabuurtii ay ciidanka ammaanka jidweyneyaasha gaadiidka ka dhigeen kuwa aan la wadan karin waxaa lagu qiyaasayaa inay ahaayeen 15 ilaa 20.
Milkiileyaashii laga banjariyey gaadiidkoodii oo ay ciidanka ammaanka jidweyneyaasha gaadiidka hawada ka saareen shaagagga markii uu kacdoonka ka jirey Minneapolis waxay xaq u yeelan karaan lacag-u-celin.
Milkiileyaasha gaadiidka waxaa khasab ku ah inay soo buuxiyaan foom la yiraahdo qaansheegadka dhibaatada ku gaartay, oo waa inay u soo gudbiyaan Department of Administration Risk Management (Waaxda Maamul-Maareynta Khataraha), taasoo u xilsaaran barnaamijka ceymiska xukuumadda gobolka Minnesota. Milkiileyaasha gaadiidka waxay ogeysiis ka helayaan ceymiska Maareynta Khataraha (Risk Management) ka dib marka go'aan laga gaaro qaansheegadkooda.
Foomka qaansheegadka sharciga ah
Guji oo halkan kala soo deg foomka qaansheegadka.
Fadlan soo raaci wixii caddeymo ah ama waraaqihii lacagta aad bixisay si aad ugu taageerto qaansheegadkaaga.
Waa maxay “qaansheegadka sharciga ah?”
Qaansheegadka sharciga ah waa dacwad madani ah oo ka dhan ah gobolka. Dadka hanti ay leeyihiin loo geystay burburin uga timid ficil ay ku sameeyeen ciidanka gobolka waxa ay heli karaan lacagta sameyska.
Maxaan keenayaa si aan u helo kharashka sameyska ah ee shaagaggeygii la iga banjariyey?
Ugu yaraan, waxa lagaa rabo in aad keento waa:
Macluumaadka wixii dhacay: taariikhdii, saacaddii, goobtii (meesha baabuurku kuu yaallay).
Macluumaad faahfaahsan oo ah wixii dhacay, sida in ay ciidanka ammaanka jidweyneyaasha gaadiidka ku lug lahaayeen iyo sababta uusan ficilkaas caddaalad kuugu ahayn.
Macluumaad ku saabsan gaadiidka: caddeynta milkiilaha, taargada, shirkaddii sameysay, modeelka, sannadka, midabka.
Caddeynta kharashka shaagagga cusub, kharashka jiididda (haddii aad u yeeratay wiiish), waraaqaha caddeynta lacagta kaa baxday.
Magacayga miyaa la siin doonaa booliiska ama ma danbi ayey igu tahay haddii aan qaansheegad soo dirsado?
Habraaca qaansheegadka sharciga ah waa mid ka gaar ah kan waaxda garsoorka. Ciidanka gobolka ayaa, si ay noqotaba, iska eegi doona baabuurka qaansheegad kasta si ay u xaqiijiyaan inaysan lacag siineyn gaadiidkii ku lug lahaa falal danbiyo ah, sida kuwa la soo xaday ama loo isticmaalay hub ahaan ama qaadista hubka.
Qareen miyaan u baahnahay si aan u soo dirsado qaansheegadka?
In kastoo aad mar kasta xor u tahay inaad la xiriirto qareen ku caawiya, laakiin habraacaas kaagama baahna qareen sharci ah.
Ma khasab baa inaan imaado si aan u sheegto hadalkeyga oo markhaati-kaca ii ah?
Maya, laakiin ceymiska Maareynta Khataraha (Risk Management) ayaa kula soo xiriiri kara si ay kaaga helaan macluumaad ama faahfaahin dheeraad ah.
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan habraaca qaansheegadka
Kala soo xiriir Department of Administration Risk Management (Waaxda Maamul-Maareynta Khatarta) risk.management@state.mn.us ama 651.201.2586
Dhibaatada ay geysteen xafiisyada booliska kale
Habraaca halkan kuugu qoran waa waxyeellada gaadiidka ay dhibaatada u geysteen ciidanka ammaanka jidweyneyaasha gaadiidka oo keliya. Haddii ay baabuurkaaga waxyeello kaa gaarsiiyeen ciidanka ammaanka jidweyneyaasha gaadiidka ama booliska caadiga ah, fadlan la xiriir xafiisyadooda kala duwan oo weydiiso habraacooda qaansheegadka.